China nylon giya yemuchina fekitori nevatengesi H & F. nylon
Zvinhu zvenaironi chisimudziso
Zvinhu zvenaironi Crane chisimudziso
Zvinhu zvenaironi tower crane pulley
Zvinhu zvenaironi cliver chisimudziso
zvinhu zvenaironi Bhandi chisimudziso
Zvinhu zvenaironi Roller
Zvinhu zvenaironi Gear
waya tambo inotungamira
akasarudzika akaumbwa nylon zvikamu
Waya tambo gwaro
Yakasarudzika zvakaumbwa zvinhu zveyiloni
akasiyana hukuru hwenyuchi washer
nylon tambo nhungamiro yakagadzirirwa matani gumi crane
Yakakwira mhando nylon pulley ye crane
Nylon bhandi pulley yakaitwa muchina
zvinhu zvenaironi giya kuti michini
zvinhu zvenaironi chisimudziso rakagadzirirwa erevheta
Nylon giya, seyayo yega-mukana wehuremu huremu, nyore kudhara, yakanaka kurira kwekuramba, hupenyu hwakareba hwekushandisa. Kudzivirirwa kwezvikamu zvematombo, zvakashandiswa muinjiniya indasitiri kweanoda kusvika makore makumi matatu, uye chikamu chayo chemusika chiri kuwedzera kuchangobva kuitika nekuda kwemutengo wayo wakaderera uye kusvibiswa kwakaderera kune zvakatipoteredza.
60160 * ∅12 * 30
Zvinhu zveNylon zvinonyanya kushandiswa mumishini inosanganisira ingangoita mhando dzese dzemuchina. Nylon giya inogona kushandiswa mumachira emachira kuendesa simba. Kuiswa kweiyo nylon giya kunogona kudzivirira simbi giya nekuti vanoshanda pamwechete kuendesa simba kutyaira muchina wese. Kuisa nylon pulley kunogona kuve nekuzvigadzira mafuta pakati pezvikamu zvekubatanidza, yakanyanya kunyarara mamiriro ekushanda, mutengo wekuburitsa wakaderera, nguva yakareba yebasa uye mutengo wakaderera mune yekupedzisira kugadzirisa. Mumakore apfuura, mainjiniya anongoziva chete kuti kutapurirana kunogona kuitiswa chete nesimbi zvikamu, Sezvo zvinhu zvakawanda uye zvitsva zvinotanga kugadzirwa, zvigadzirwa zvenylon zvinotanga kubata maziso evanhu. Zvikamu zveNylon kubva pakutanga chaizvo zvinoshandiswa muindasitiri yekireni uye iyo yakazoshandiswa mune mamwe maindasitiri kusimudzira mashandiro ese emachina.
Sekusimukira kwehupfumi hwenyika, magiya eNylon anga achifukidza yakawanda uye yakawanda chikamu chemusika icho chinotanga kuwanikwa nesimbi dzesimbi. Vanhu vanoziva kuti nylon magiya anotsiva simbi magiya muindasitiri ndiwo maitiro. Parizvino mashandisiro emagetsi enylon anogona kutadza kusvika hafu yeaya emidziyo yesimbi, asi munguva pfupi iri kutevera, magiya enylon achanyatso kubata mashandiro esimbi uye pakupedzisira osara mashandisirwo esimbi kumashure.
Isu huafu tave kuita mukusimudzira kune vese vatengi vedu kushandisa nylon magiya mukugadzira kwavo, Uye isu tinotenda kuti kushandiswa kwemayiloni magiya kuchazonyanya kufarirwa mumakore anotevera.
Pashure: zvinhu zvenaironi chisimudziso rakagadzirirwa erevheta
Zvadaro: Nylon bhandi pulley yakaitwa muchina
Zvinhu zvenaironi Helical Gears
Zvinhu zvenaironi Pinion Gears
Zvinhu zvenaironi Plastic Gears
Nylon Sprocket Gear
zvinhu zvenaironi chinotenderera aripo
zvinhu zvenaironi Pin pamwe yakakwirira kuoma
Yakagadziriswa nylon inotsvedza
yakakosha saizi nylon payakabatanidzwa
Kwete 37, Shanyang Road, Huaian Guta, China